Jack Wilshere Oo go'aan ka gaaray Mustaqbalkiisa Kooxda Arsenal
Friday, June 22nd, 2018 - 15:48:58
Wednesday September 13, 2017 - 11:44:50 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
Jack Wilshere ayaa iska diiday inuu u dhaqaaqo Trabzonspor xagaaga si uu diirada u saaro mustaqbalkiisa ciyaareed ee Arsenal.
Tababaraha Gunners Arsene Wenger ayaa u sheegay Wilshere inuu u dagaalami doono booskiisa koowaad ee xilli ciyaareedkaan, lakiin si xariif ah uma uusan iibin Kieran Gibbs, Gabriel iyo Wojciech Szczesny.
Si kastaba ha ahaatee, Wenger ayaa diyaar u ah inuu 25 jirkaan u ogolaado inuu baxo islamarkaana ciyaaryahanka uu qiimeeyo xulashadiisa oo dhan.
Tababaraha Trabzonspor Muharrem Usta ayaa u sheegay website-ka Turkiga: "Waxaan si toos ah wadahadal ula yeeshay Jack Wilshere. Waxaan dooneynay inuu amaah ku soo qaato islamarkaana aan ku abaal marino heshiis laakiin heshiiskii ayaa yimid xilli ciyaareedkii ugu danbeeyay. "
Fenerbahce iyo koox kale oo Turkiga ah, Antalyaspor, xiiseyn diiwaan gashan, oo ay weheliso Newcastle iyo Swansea. Arsenal ayaa la rumeysan yahay inay weydiisaneyso aduun dhan £ 15million si ay u iibiso .
Wilshere ayaa sannadkii ugu dambeeyay qandaraaska uu kula joogo kooxda Emirates, Wenger ayaana meesha ka saaray inuu heshiis cusub u saxiixi doono. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu u baahan yahay in uu ciyaaro kulankan, waxaana uu ku jiraa inuu ka qeyb galo kulanka Cologne ee Europa League Khamiista.